Dadweyne fara badan oo wata sawirrada murashaxiinta qaarkood iyo baabuur ay ku xiran yihiin cod baahiyeyaal ayna ku dhaggan yihiin sawirrada murashaxiinta oo ay qaarkood heeso ka daaran yihiin ayaa lagu arkayaa waddada Maka Al-Mukarama oo ah midda ugu mashquulka badan xilligan magaalada Muqdisho.
"Xildhibaannada waxaan ugu baaqaynaa inay doortaan hoggaamiye dalka badbaadin kara," ayay ka sinnaayeen dadka dibadbaxayada dhigayay iyo codadka ka baxayay cod-baahiyeyaasha ku xiray gaadiidka.
Murashaxiinta ayaa waxay ku tartamayaan sidii ay codadka ku heli lahaayeen ayna dadka uga dhaadhicin lahayaeen inay yihiin mas'uuliyin wax badan ka bedeli doona xaalka uu dalka ku sugan yahay.
Caruur iyo haween loo dhiibay calanka Soomaaliya isla markaana sida sawirrada murashaxiinta ayaa waxay socod ku marayaan waddooyinka Muqdisho qaarkood, iyadoo warar hoose ay sheegayaan in dadkaas ay yihiin kuwo la ijaartay si dadka kale loo tuso in taageero badan uu murashaxu ku dhex leeyahay bulshada.
Jawiga ay ku jirto Muqdisho maanta ayaa si weyn uga bedelen jawiyadii ay soo martay 21-kii sano ee ay dagaalladu socdeen, waxaana xubnaha xil doonka ah ay ku tartamayaan helidda taageerada shacabka, halka kuwii hore ay taageeradooda ku raadin jireen cabsi-gelinta shacabka.
Doorashada oo berri dhacaysa ayaa lagu wadaa in isla berri lagu dhawaaqo cidda ku guuleysatay loona dhaariyo xilka, iyadoo madaxweynahaas laga sugayo inuu la tacaamulo dal aanay nabadi ka jirin iyo dad la qabsaday colaadaha dabada dheeraday.
Hiiraan Online ayaa waxay si toos ah u soo tabin doontaa doorashada madaxnimo ee dalka, iyadoo ay dadweynaha Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan ay kala socon doonaan HOL sida ay doorashadu u dhacayso.